विराट कोहलीलाई ठूलो झड्का, चर्चित खेलबाट यसरी बाहिरिए » खबरहरुको एउटै केन्द्र
विराट कोहलीलाई ठूलो झड्का, चर्चित खेलबाट यसरी बाहिरिए
बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १३:५० मा प्रकाशित !
टीम इण्डियाका कप्तान विराट कोहलीको आफ्नो एक निराशाजनक सीजनपछि इंल्याण्ड जानुपर्ने थियो। तर अब कोहलीले इंल्याण्डको काउन्टी सर्रेकालागि खेल्न नपाउने भएका छन्। बीसीसीआई स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचारमाध्यमले जनाए अनुसार विराट कोहली आईपीएलपछि इंल्याण्ड जानुपर्ने थियो।
तर अब विराटले सर्रेकालागि खेल्न नपाउने भएका छन्। विराट लामो क्रिकेट र आईपीएल सीजनका कारण थकित भएका छन्। साथै विराट स्वास्थ्य समस्यासँग पनि जुधिरहेका छन्। उनलाई स्लिप डिस्ट भएको छ। तर कोहलीले सर्जरी भने गर्नुपर्ने छैन। विराट अब इंल्याण्ड भ्रमणभन्दा पहिला काउन्टी खेल्ने छैनन्। जसका कारण उनलाई निकै आराम गर्ने समय मिल्नछ।
यसअघि मुम्बईको बेस्ट अर्थोपेडिक सर्जनले विराटको स्लिप डिक्सका चेतावनी दिएका थिए। डाक्टरले विराटलाई यदि काउन्टी खेल्ने हो भने इंल्याण्ड भ्रमणबाट बाहिर हुनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। लगाार क्रिकेटका कारण उनको चोट बढ्दै गएको छ। र उनलाई आराम गर्न भनिएको हो। बुधबार डाक्टरले विराटलाई उनको स्पाइनल नर्व इंजरीका विषयमा विस्तारमा बताएका थिए। तत्काल विराटले सर्जरी गर्नुपर्ने भने छैन। विराटले साउथ अफ्रीकाको भ्रमणका बेलमा गर्दनमा भएको समस्याका कारण एक खेल खेल्न पाएका थिएनन्।
विराटलाई काउन्टी क्रिकेटमा आफ्नो डेब्यूकालागि जुनमा इंल्याण्ड प्रस्थान गर्नुपर्ने थियो। कोहलीले सर्रे टीममा लागि रोयल लन्डन वनडे कप खेल्नुपर्ने थियो। त्यसबाहेक तीन फस्र्ट क्लास खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ। यसक्रममा कोहली ररी बन्र्सको कप्तानीमा खेल्थे। कोहली ९ देखि १२ जुनसमम साउथम्पटनमा रोज बाउलमा ह्याम्पशायर विरुद्ध काउन्टीमा डेब्यू गर्नुपर्ने थियो।
PREVIOUS POST Previous post: गोरेको बयान दोस्रो दिन पनि जारी, सुरक्षाको प्रश्न उठाएपछि गोरेलाई कडा सुरक्षा व्यवस्था
NEXT POST Next post: अफगानिस्तानमा ११ जना तालिबान मारिए
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १३:५०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १३:५०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १३:५०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १३:५०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १३:५०